Tirada na soo booqday.	Maanta8285shalay41680Isbuucaan244146Isbuucii hore319617Bishaan1001061Bishii hore985537Maalmaha oo dhan4819231Hadda Waxaa toos ugu jiraan: 256 guests, 3 members Your IP: 184.73.74.47 , Today: May 25, 2013	Faah Faahin Dagaal Afmadoow ka dhacay.
Written by gobal on 29 October 2012. Ugu yaraan 4 maleeshiyo ayaa ku geeriyootay tiro ka badan 10-kalena dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo Church bombing kills ten, injures over 140 in Nigeria
Written by gobal on 29 October 2012. At least ten people have been killed and over 140 others wounded after a bomber drove into a Catholic Dagaallo culus oo ka dhacay Degmada Bardaale iyo Guddoomiye degmo oo dil ka bad-baaday.
Written by gobal on 29 October 2012. Dagaall culus ayaa habeenkii xalay ka dhacay Degmada Bardaale ee gobolka Bay iyadoo dagaalkaasi dil Fariisin Maleeshiyada DF ay ku leeyihiin Deegaanka NO:50 oo xalay weerar Hoobiyayaal ah lagu qaaday.
Written by gobal on 29 October 2012. Wararka ka imaanaya Wilaayada Islaamiga gobolka Sh/hoose waxay sheegayaan in Ciidamada Mujaahidiinta Waa Islaamaah!! Waa Dhawaq Dharaar kasta Dhageheennu Maqlaan.
Written by Maamul on 29 October 2012. Duullaannada Gaaladu ay kusoo qaadeen wadamada Muslimiinta waxay billow u ahayd dagaallo Jihaad ah Ma Guddi Madax Banaan Mase Mooriyaantii Faroole (Maqaal Is-dul taag ah).
Written by Maamul on 29 October 2012. Dhawaan waxaa baraha Internet-ka ee Maamulka Puntland iyo Kooxda Ictisaamka lasoo dhigay wax lagu sheegay Ciidanka DF-ka Oo Loo Fasaxay Dhaca Hantida Shacabka iyo Mushaaraadkoodi oo AMISOM loo wareejiyay (Xog Hoose).
Written by Maamul on 29 October 2012. warbixin sir ah oo lahelay ayaa daaha ka feydaysa dhaca iyo boobka xowliga ah oo ay ciidanka Dowladda Sheekh Abuu Muscab oo ka hadlay Weerarkii lagu dilay Taliyihii Guutada 5-aad ee DF.
Written by Maamul on 29 October 2012. Afhayeenka Ciidamada Mujaahidiinta Sheykh C/casiis Abuu Muscab oo Shir Jaraa’id u qabtay Warbaahinta ay
Ukrainians cast ballots in key parliamentary election
Written by gobal on 28 October 2012. Ukrainians are casting their ballots in key legislative polls in a popularity test for President Viktor Sarkaal Sare oo DF ka tirsan oo lagu dilay Weerar dhabba gal ah.
Written by gobal on 28 October 2012. Faah faahino kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar dhabba gal oo Ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta ay Qarax gaari Taw ah lagu gubay Askar AMISOM lagu dilay oo ka dhacay Degmada Shalanbood.
Written by gobal on 28 October 2012. Qarax Miino aad u xoogan ayaa goordhow ka dhacay Degmada Shalanbood ee Wilaayada Islaamiga gobolka Sh/hoose Ciidamada AMISOM Oo Hay’ado Dawa dhacday siday u gelbiyay tuulooyin Balcad hoos yimaad.
Written by gobal on 28 October 2012. Faah faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dhaq dhaqaaq ay shalay ciidanka AMISOM iyo maleeshiyaadka Shabakadaha Ictisaam ma Dambi-baarista Puntland bey isu Beddeleen? Maxayse Shahiid Cawlaqi iyo Shabaabka ugu Diganayaan?
Written by gobal on 28 October 2012. Ilaah baa mahad leh. Ammaan iyo naxariis Nabi Muxamed korkiisa ha ahaato!Ciid Mubaarak. Waxaan Ilaahay Ma Runbaa inuu Shahiiday Ku Xigeenka Amiirka Alqaacidda ee Jaziiratul Carab? (Dhageyso)
Written by gobal on 27 October 2012. Todobaadyadii lasoo dhaafay waxay qaar ka tirsan qalabka Warbaahinta Caalamiga ah ay hadal hayeen Mu’assasada Warbaahinta Al-Kata’ib oo Filim Cusub soo saartay. (DAAWO)
Written by Maamul on 27 October 2012. Mu’assasada Warbaahinta Al-Kata’ib ee garabka warbaahineed Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa soo Qarax ka dhacay Kismaayo.
Written by gobal on 27 October 2012. Wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ee Wilaayada Islaamiga gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in Sidee looga ciiday Magaalada Marka ee Wilaayada Islaamiga gobolka Sh/hoose…?.
Written by gobal on 27 October 2012. Wilaayadaadka Islaamiga Soomaaliya maalintii shalay iyo maanta waxaa looga ciiday si weyn dad aad u Magaalada Baardheere oo maalintii labaad si wanaagsan looga ciiday.
Written by gobal on 27 October 2012. Wararka naga soo gaaraya Magaalada Baardheere ee Wilaayada Islaamiga gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan Sarkaal ka tirsan Kenya oo lagu dilay Xerada qaxootiga Xagardheer.
Written by gobal on 27 October 2012. Sarkaal ka tirsan Dowladda Kenya ayaa xalay lagu dilay Xerada qaxootiga Xagardheer dilkaasoo ay geysteen Magaalada Muqdisho oo maalintii labaad laga Ciidayo.
Written by gobal on 27 October 2012. Shacabka ku nool Caasimada Magaalada Muqdisho ayaa saaka maalintii labaad si weyn ugu dabaal degaya Sh. Mukhtaar Abu Zubeyr oo Kalimadiisa Ciida uga hadlay Arrimo badan oo Xasaasi ah " Dhagayso".
Written by Maamul on 27 October 2012. Amiirka ugu Sareeya Mujaahidiinta Soomaaliya Sh.Mukhtaar Abu Zubeyr oo Munaasabadii Ciida kalimad hambalyo Magaalada Jilib Oo si Heer Sare ah looga Ciiday Daawo Sawirada.
Written by Maamul on 26 October 2012. Magaalada Jilib oo kamid ah magaalooyinka dhaca gobolka Jubbada Dhexe ayaa maanta si weyn looga dabaal Daawo Sawirada Sida Looga Ciiday Magaalada Baardheere.
Written by Maamul on 26 October 2012. Shacabka muslimiinta wilaayada Gedo ayaa maanta si wanaagsan ugu dabaaldegay munaasabadda ciidul adxaa Sidee Looga Ciiday Wilaayaatka islaamiga Somaaliya (Warbixin).
Written by gobal on 26 October 2012. Dhammaan wilaayaatka islaamiga ee dalka Somaaliya ayaa maanta si heer sare ah looga ciiday munaasabadda Start«71727374757677787980»End	Si Fudud ubaro Qur'aanka Adigoo Joogo Gurigaaga Online Riix Halkan